Odd World -TokyoNepal.com
Nepal Time: 06:08 PM
१६ वर्षअघि मरेको मुसाबाट जन्मियो सन्तान
काठमाडौं । जापानका वैज्ञानिकहरुले १६ बर्ष पुरानो मुसाको मृत कोषबाट क्लोनिङ प्रविधि अपनाई उस्तै शरीर र ब्यबहार भएको स्वस्थ मुसो तयार पारेका छन् । मृत कोषबाट पुनर्जीवन सिर्जना गरिएको वैज्ञानिक जगतमै यो पहिलो पटक...
नेताले अदालतमा भने : मैले लगाएको अण्डरवेयर ५० वर्ष पुरानो
भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका एक नेताले अदालतसामु आफुमाथिको आरोपको खण्डन गर्ने क्रममा निकै नै चोटिलो शाव्दिक प्रमाण पेश गरे । भ्रष्टाचार गरेर निकै भव्य तथा शयलपूर्ण जिवन बिताउने गरेको आरोप लागेका ती नेताको कथन...
आँखाको उमेर ५० करोड वर्ष
तपाइँ कति वर्ष उमेरको हुनुभयो हँ ? अनि तपाइँको आँखा कति वर्षको भयो ? सहज उत्तर आफु जति वर्षको भइयो आँखा पनि उत्ति वर्षको नै भयो । तर होइन, तपाइको उमेर कलिलै भएपनि आँखा...
काठमाडौं । यदाकदा हामीले आकाशबाट माछा वर्षिएको समाचार सुनेका छौं । हावाको चाप कम भएको स्थानमा बढी चाप भएको क्षेत्रबाट तीब्र गतिले हावा बहन्छ । तीब्र गतिले हावा बढ्दै जाँदा दायाँ बायाँ र अगाडिबाट आईरहेको...
सुंगुरभित्र मानव अंगहरुको विकास गराउने प्रयास !
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा सुंगुरभित्र मानव अंगहरुको विकास गराउने प्रयास थालिएको छ । वैज्ञानिकहरुले पाचन ग्रन्थीको निर्माणका लागि सुंगुरको भ्रूणबाट डिएनएका क्रमहरुलाई हटाइरहेका छन् । त्यसको सट्टा अन्य कोषहरु निर्माण गर्ने स्टीम कोष हालिरहेका छन् । त्यसले...
हतियारको विरोधमा कृत्रिम लिंग बोकेर हिड्न थाले युवतीहरू
हतियारको विरोधमा अमेरिकाका युवतीहरू लिंग बाकेर हिड्न थालेका छन् । सरकार हतियार नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै टेक्सासका छात्राहरुले कृत्रिम लिंग बोकेर हिड्न थालेका हुन् । सरकारको विरेधमा युवतीहरूले यो अभियान चलाएका हुन् । अमेरिकी युवतीहरुले...
लौ हेर्नुस्, विश्व कीर्तिमानी भेंडा
अस्ट्रेलियामा एउटा भेँडाको जिउबाट ४० किलो ऊन निकालिएको छ । शरिरको ऊनले टाउकोको अलिकता मुख मात्रै देखिएको भेडाको जिउका ऊनले विश्वलाई अचम्मित तुल्याएको छ । अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेराको बाहिरी इलाकामा पाइएको क्रिस नामको भेडाको जिउबाट...
जापानको ओसाकाबाट देखिएको एलियन्स हो ?
टोकियो । केही समयअघि जापानको ओसाकाको अकाशमा सेता ग्लोबहरू देखिए, ती हावामा उडिरहेका थिए । अकाशमा उडिरहेको जस्तो देखिने १० वटा ग्लोबहरू के थिए त ? हावामा उडेका ती जे थिए, त्यसको अनुसन्धान भइ...
भियतनाममा सडकमा कुकुर विरालो निषेध !
अधिकांश मुलुकमा कुकुर विरालो परिवारकै सदस्य जस्तो गरी पालिन्छ । तर भियतनाममा भने कुकुर विरालो सडकमा डुलाउनसमेत पाइदैन । सरकारले नै सडकमा कुकुर लैजान निषेध गरेको हो । सहरमा कुकुर पाल्ने घरबेटीहरुको बिहानको धन्दा नै...
कर्मचारीहरु गर्भवती हुनुअघि स्वीकृति लिनुपर्ने !
५ जुलार्इ, बेइजिङ । एक चिनियाँ कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरु गर्भवती हुनुअघि स्वीकृति लिनुपर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । उसको योजनासँगै कम्पनीप्रति चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरु र सामाजिक सञ्जालमा घृणा उब्जाएको छ । हेनान प्रान्तको एउटा वित्तीय संस्थाका...
जुन अन्तिम दिन ६१ सेकण्डको एक मिनेट
जुन महिनाको मध्यरातीदेखि विश्वकै समय एक सेकेण्ड ढिलो भएको छ । विश्वमा अफै यस्तो भएको भने होइन, वैज्ञानिकहरूले एक सेकेण्ड ढिलो गराएका हुन् । अन्तराष्ट्रिय स्टाण्डर्ड समयलार्इ मिलाउन भन्दै एक सेकेण्ड ढिला गरिएको हो । वैज्ञानिकहरुले...
विश्वका १० अनौठो सेक्स रेकर्ड
विश्वमा विभिन्न चिजमा रेकर्ड बनाए जस्तै सेक्समा पनि रेकर्ड बनाउने होड चलेको छ । जसमध्ये केही यस्ता रेकर्ड छन्, जुन यति अनौठो छ कि त्यसलाई विश्वास नै गर्न नसकिने खालका छन् । यस्ता अनौठो...
जापानबाट गायक कर्म दोङको “तिम्रो चौबन्दी… “को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित)
नागोयामा ल्होछार साँझ-२०१८ सम्पन्न
अनेसास जापानको नया नेतृत्वमा दिप पाठक, बिष्णुप्रसाद घिमिरेको पहिलो कृति “एक्लो बिजेता”को बिमोचन
तमु धि जापान,नागोयाद्वारा बिरामी अरुण गुरुङको उपचारार्थ संकलित सहयोग रकम हस्तान्तरण
जापानमा नेपाली कवि र कविता कृतीको विमोचन सहित साहित्यिक शृंखला सम्पन्न
जापानमा भएको तेक्वान्दो प्रतियोगितामा कुईकेल र श्रेष्ठले जिते स्वर्णपदक
चितवन समाज जापानद्वारा राउटे युवाको उपचारको निम्ति संकलित रकम हस्तान्तरण
नयावर्षमा कलाकारहरु सुगम,नम्रता र नबिनले यसरी तताए नागोयाबासिलाइ (फोटो फिचर सहित )
राप्रपाको भातृ संगठन ओनो जापानको एकता भेला सम्पन्न
सुगम पोखरेल,नबीन के भट्टराइ सहित कलाकारहरूले नया बर्षमा नागोया तताउने
कलाकार राजिब लामाको “0ne Love” को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित)